Harry Paakava Sally - Ryan T Anderson | KUSVIRA
Harry Paakava Sally - Ryan T Anderson
Mukomana anogona "kubatirirwa" mumuviri wemusikana here? Mushonga wemazuva ano "unogona kudzoreredza" bonde? Ko bonde redu "rakapihwa" isu pakutanga here? Ndeipi mhinduro ine rudo zvakanyanya kumunhu anosangana nemweya wekupokana? Mutemo wedu unofanirwa kuti chii nezvenyaya ye "zita remurume"?
Harry Paakava Sally inopa mhinduro dzinofungidzirwa kumibvunzo inomuka kubva kune yedu transgender nguva. Kutora pane zvakanakisa ziviso kubva kubiology, psychology, uye uzivi, Ryan Anderson anopa maonero akajeka ezvekufanirwa kwevanhu, nzira yakaenzana yehurongwa hweveruzhinji pamusoro pekuzivikanwa kwevakadzi, uye kuongororwa kwakadzama kwemitengo yevanhu yekuwanira zvisikwa zvemunhu zvisizvo.
Iri bhuku rinoburitsa musiyano uripo pakati peiyo nhepfenyuro yezuva yekushomeka kwevakadzi uye chokwadi chinosuruvarisa chekurarama nehurema dysphoria. Inopa izwi kuvanhu vaiyedza “kushandura” nekushandura miviri yavo, uye vazviona zvisiri nani. Zvinonyanya kunetsa inyaya dzakataurwa nevakuru vakakurudzirwa kuchinja savana asi vakazozvidemba kuti kuzviisa pasi pemaitiro akanyanya.
Sezvo Anderson anoratidza, nzira dzinonyanya kubatsira dzekurapa dzinotarisa pakubatsira vanhu kuti vazvigamuchire uye vagare mukuwirirana nemiviri yavo. Kunzwisisa uku kwakakosha kune vabereki vane vana muzvikoro uko vanopa mazano vangatenderedza mwana kuenda mukutendeuka kumashure kwemisana yavo.
Wese munhu ane chimwe chinhu chiri mungozi mumakakatanwa pamusoro peiyo transgender mafungiro, apo zvisirizvo "antidiscrimination" marongero anotendera varume vezvisikwa mudzimba dzevakadzi uye kuranga vekuAmerican vanobatisisa chokwadi nezvechimiro chevanhu. Anderson anopa zano rekusundira kumashure nenheyo uye kungwara, tsitsi netsitsi.
Tenga Kana Harry Akava Sally kubva kuAmazon Pano.